ISITHEMBISO SERING GUIDE | INJONGO EYIYO KUNYE NENJONGO - UTHETHATHETHWANO
Eyona Uthethathethwano Yintoni iringi yesithembiso? Eyona Ntsingiselo kunye nenjongo
Yintoni iringi yesithembiso? Eyona Ntsingiselo kunye nenjongo
Ukusuka kumnwe wokuyinxiba kwiindleko, funda isikhokelo sethu kwizithembiso zeringi, kubandakanya neentsingiselo, izithethe kunye nokunye. Ubuninzi / iShutterstock.com Ukuhlaziywa ngoMatshi 15, 2021 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Phakathi kwamakhonkco esithembiso, amakhonkco okusulungeka, amakhonkco okuzibophelela, amakhonkco angaphambi kokuzibandakanya nangaphaya, ukudideka okujikeleze oko kuthethwa yiringi yesithembiso kuyaqondakala ngokupheleleyo. Yintoni injongo yendandatho yesithembiso? Ngowuphi umnwe oya kuwo? Ngaba zenzelwe abasetyhini kuphela, okanye ngaba zikhona izithembiso zesithembiso emadodeni? Uyifumana njani, uyinika, uyithenga, uyibuyisela enye? Ke. Zininzi. Imibuzo. Kungenxa yoko le nto sicofe iingcali zezacholo ukuze sichithe yonke into oyifunayo malunga nentsingiselo yezindandatho zesithembiso.
indlela yokwenza itshathi yokuhlala ngomtshato
Yintoni iringi yesithembiso?
Iringi yesithembiso iringi enikwa ukusuka komnye umntu ukuya komnye kubudlelwane bezothando ukubonisa ukuthembeka nokuzinikela kwabo, rhoqo (kodwa hayi rhoqo) ngaphambi kwendibano. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ukunika iringi yesithembiso kufanekisela ukuzinikela kwelinye iqabane kubudlelwane, kwaye ukwamkela iringi kwenza njalo kulowo umamkelayo.
Isithembiso seRingi yeNtsingiselo
Njengoko igama licebisa, izithembiso zemisesane zibonisa isithembiso esenziwe phakathi kwabantu ababini, kodwa intsingiselo, intsingiselo yobuqu inokwahluka kwizibini ezitshatileyo. Isibheno sesazinge sesithembiso sithathwa ikakhulu kwiintsingiselo ezininzi ezinokumela, utshilo uKimberly Kanary, usekela-mongameli wobudlelwane boluntu kunye nemidiya yoluntu Kay amatye anqabileyo . 'Abantu abaninzi abatshatileyo banikezela okanye banxibe amakhonkco ezithembiso ngokuthe ngqo ukubonisa ukubandakanyeka kwixa elizayo, ngelixa abanye besenza njalo njengophawu lokuzinikela omnye komnye.'
'Uyazithembisa omnye komnye,' ucacisa uBrooke Brinkman, usekela mongameli wentengiso kunye nonxibelelwano USimon G. Ubucwebe , Ofumene umsesane wesithembiso kumyeni wakhe ngoku unyaka onesiqingatha ngaphambi kokuba baganane. Ngelixa lika-Brinkman, iringi yayisithembiso sokuba kuyakubakho ukubandakanyeka kwikamva, akusoloko kunjalo. 'Ndihlala ndicinga ngezindandatho zesithembiso ezifana nesiko lenkulungwane yokunika isithandwa sakho samabanga aphakamileyo iringi okanye ipini,' utshilo uElizabeth Woolf-Willis, GG, AJP, umququzeleli wentengiso kwaSimon G. jewelry. 'Ngoku ungaphezulu' kokuthandana' — kukho umfuziselo wobuhlobo obubonisa ngaphandle. '
Imbali yeeRingi zeSithembiso
Ngokuka-Brinkman, umbono wokunika umsesane njengesithembiso sothando uthandana kwiminyaka engamakhulu-eyadlulayo-kwaye isiko lokunxiba umsesane ukubonisa ukuthembeka nokunyaniseka lisusela kumaxesha amandulo. Kukho ubungqina bokuba oomolokazana baseRoma banxibe iibhendi zokuzibandakanya kwinkulungwane yesi-2 ye-BC. Amakhonkco e-Posy, akrolwe imibongo yothando, abuyela kwinkulungwane ye-16th eNgilane, ngelixa iiringi ze-Acrostic-upela igama kumatye anqabileyo (umzekelo, iruby, emerald, garnet, amethiste, iruby kunye nedayimani yopelo ')' kumaxesha aseGeorgia naseVictoria.
Izindandatho zesithembiso zala maxesha ziye zavela kuphela njengesiqhelo kule minyaka ilishumi idlulileyo okanye njalo, ubukhulu becala enkosi kuluntu olujikeleze izithembiso zabantu abadumileyo (cinga: Abazalwana bakaJonas kunye nesibini esithandanayo uMiley Cyrus noLiam Hemsworth).
Ngaba Isangqa seThembiso siyafana neRingi yokuCoca?
Ngamanye amaxesha, kodwa hayi rhoqo. Xa uJoe Jonas uxelele iinkcukacha kudliwanondlebe lowe-2008 ukuba yena kunye nabantakwabo 'amakhonkco abonisa,' isithembiso kuthi nakuThixo ukuba siza kuhlala sicocekile 'de sitshate,' izithembiso zokwenza amakhonkco ziye zangqamana nemisesane yobumsulwa.
Kodwa uBrinkman ufuna ukwenza umahluko: 'Abanye abantu baye badideka isigama. Xa uthetha ngokuziyeka-kwaye iringi inikwa ngumzali emntwaneni, okanye kuye ngokwakho-ibizwa ngokuba yiringi yokusulungeka. ' Izithembiso zokuthembisa, kwelinye icala, zinikezelwa njengophawu lokuzibophelela ngaphakathi kobudlelwane obunothando.
Ixesha lesithembiso seRingi kunye ne-Etiquette
Nangona amakhonkco esithembiso awafani nemisesane yomtshato, akufuneki aphathwe kancinci. Umsesane wesithembiso kufuneka unikwe emva kokuba isibini sithandane ixesha elininzi-unyaka okanye nangaphezulu-ukubonisa ukuba bazimisele kangakanani ngobudlelwane babo, utshilo uKelly McLeskey-Dolata, umseki wecandelo lokucwangciswa komsitho nenkampani yoyilo Umsitho weSavvy kwingingqi yeSan Francisco Bay. Ke, ayisiyonto ithi kuya kufuneka unike okanye unxibe iringi yesithembiso xa sele ukulungele ukuzibophelela.
U-Brinkman ukubonile ukunyuka kokuthandwa kwezindandatho zezithembiso zibonisa imeko ekhulayo yezibini ukuba zihlale kunye kunye / okanye zitshate kamva ebomini. Nangona bengekakulungeli — okanye bade bafune — ukuzibophelela emtshatweni, isithembiso sibonisa ukuba ukuzibophelela kwabo kungaphaya kokuthandana okanye ukuhlala kunye.
Iindleko avareji yetax yerenti
Ngaba Zenzelwe Abafazi Nje-Okanye Ngaba Zikho Izithembiso Zomfana?
Xa usiva 'isithembiso,' ingqondo yakho inokucinga kwangoko ngendoda enika enye ibhinqa. Kodwa abafana bethembisa amakhonkco aqhelekile. Uyakhumbula ukuba sakhankanya uMiley Cyrus kunye noLiam Hemsworth? Ngaphambi kokuba batshate ngo-2018, bobabini uKoreshi noHemsworth babefaka imisesane yokuthembisa. Ezinye izibini zinika amakhonkco ezithembiso omnye komnye. Ngamanye amaxesha umntu omnye uya kunika iqabane lakhe ukuba lithembise ukuzibophelela kwabo kwaye babonakalise ukuba babuxabise kangakanani ubudlelwane. Inqaku leli, nabani na unokunika okanye unxibe iringi yesithembiso.
Nguwuphi Umnwe Ngaba Isangqa Sethembiso Siyaqhubeka?
Nguwuphi umnwe — okanye nokuba yeyiphi na isandla — onxibe iringi yakho yesithembiso ixhomekeke kuwe. Izithembiso zeringi zinokufakwa nakowuphi na umnwe, utshilo uBrakman, esithi ngamanye amaxesha banxitywa kwityathanga entanyeni. Eyona ndlela ixhaphakileyo yokufaka umsesane wesithembiso kwiminwe yeringi-ngasekhohlo ukuba awutshatanga, kwaye ngasekunene ukuba utshatile. Isizathu sokuba banxibe umnwe wesandla sasekhohlo sivela kwinkolelo yakudala (ngelishwa ayichanekanga ngokwasemzimbeni) ukuba kukho umthambo obaleka ngqo usuka kuloo mnwe uye entliziyweni.
Ngaba ifanele ibe njani iRingi yeSithembiso?
Ngokwesiqhelo, nantoni na iya xa isiza kuthembisa amakhonkco. Ngokukrakra, akukho mithetho okanye iimfuno apha. Izithembiso ezithandwayo zemixholo yesimbo kunye nezitayile zibandakanya iintliziyo okanye uyilo olunxibeleleneyo ukumela umanyano lwesibini, amakhonkco e-Claddagh kunye namakhonkco angunaphakade, kunye neebhendi ezinomfanekiso wobugcisa okanye amatye. Imisesane yokuzibandakanya ineempawu ezingcwele; Izindandatho zesithembiso zihlala zijongwa njengefashoni, utshilo u-Brinkman, olumkisa ngokukhetha isitayile esinokukhuphisana neringi yothethathethwano-ukuba leyo yeyona njongo yakho. Zombini zisebenza ngenjongo, utshilo u-Brinkman. 'Ufuna ukuqiniseka ukuba abajongi ngokufanayo.'
Ixabisa malini ixabiso lesithembiso?
Akukho mithetho okanye zikhokelo malunga nokuchitha imali kwizithembiso, kodwa ihlala iphantsi kakhulu kuneringi yokuzibandakanya. Ku-Simon G. Ubucwebe, izithembiso zokuthembisa zihlala zisuka kwi- $ 500 ukuya kwi-2,000 yeedola; kwaKay Jewellers, baqala ukusuka kwi-199 ukuya kwi-599 yeedola. Khumbula, amaxesha amaninzi abantu abathenga amakhonkco ezithembiso babancinci kwaye abanandlela yokuchitha imali eninzi, utshilo uMcLeskey-Dolata.
Kuphi ukuthenga iRingi yeSithembiso
Ivenkile yakho yobucwebe yindawo efanelekileyo yokuqalisa ukukhangela i-sparkler engumfuziselo wezinye zakho ezibalulekileyo. Oko kwathethi, ukuba ukwimeko yokujonga nje okanye ufuna ukwandisa iihorizons zakho, ezi zezona ndawo zibalaseleyo Thenga amakhonkco ezithembiso kwi-intanethi .
Zales : I-Zales inokukhetha okumangalisayo kwezindandatho zesithembiso ukusuka Iziqwenga eziphefumlelweyo zeDisney ukuthandana ngokungapheliyo kwaye Amakhonkco e-Claddagh . Banikezela ubucwebe kumaxabiso awahlukeneyo nawo-isixa osichithayo ekugqibeleni sise kuwe.
Etsy : Ukuba ufuna into encinci yobuqu, i-Etsy inezinto ezininzi ezinentsingiselo (kwaye ezingabizi kakhulu) ubucwebe onokukhetha kuzo. Isipho se-S.O yakho. a Ibhendi entle isitampu ngoonobumba bakho bokuqala okanye chola iseti ye amakhonkco ezithembiso ninganxiba nobabini.
kuphosiwe : Ezi zinto zintle zobucwebe ziyindlela entle yokubonisa uthando lwakho kunye nokuzibophelela. Kwaye uninzi lwamakhonkco aqala phantsi kwe- $ 100, nawo ayabiza. Kuxhomekeka kuhlahlo-lwabiwo mali, unokuncamathela kumakristali angamaSwarovski okanye-ukuba uziva unamanzi-uphucule ubucwebe. Ngayiphi na indlela, la makhonkco amangalisayo ngawona mlinganiso ulungileyo wokutsala amehlo kunye nokungajongelwa phantsi.
UMlambo iNayile Xa kufikwa kumba wokubhiyozela amanqanaba obudlelwane, iBlue Nile yenye yabathengisi bethu. Banokhetho lobucwebe kuwo onke amanqanaba obuhlobo bakho, kubandakanya ukubandakanyeka, umtshato kunye namakhonkco esikhumbuzo. Ngelixa indawo yabo ingenalo icandelo lesithembiso lesithembiso, zininzi izinto onokukhetha kuzo ezihambelana nesiganeko, ukusuka Izitayile ezincinci ukuqaqamba amaqela angunaphakade .
Uyinika njani iRingi yeSithembiso
Enye into akukho mthetho unzima kwaye ungxamisekileyo? Uyinikela njani iringi yesithembiso. Ayizi kulindelo lwendabuko olufanayo lwesindululo esicwangcisiweyo, nesindululo apho umceli eguqa ngamadolo. Izithembiso zokuthengisa amakhonkco zihlala zinikezelwa njengosuku lokuzalwa, usuku lwezithandani okanye isipho seeholide, utshilo uMcLeskey-Dolata. Nokuba isidlo sangokuhlwa sothando sesibini yindawo efanelekileyo yokutshintshiselana okunentsingiselo. Kwimeko yesangqa sesithembiso, ingakumbi yencoko malunga nentsingiselo yayo, kunye nesithembiso esenziwayo, 'ucacisa uBrinkman. Ngelixa uthethathethwano, kugxilwe kwindandatho kunye 'nexesha.'
barack kunye nomichelle obama umtshato
Kwenzeka ntoni kwiRingi xa nahlukana?
Ngelixa amakhonkco ezithembiso enzelwe ukubonisa isifungo sobomi bonke, izinto ziyenzeka kwaye ubudlelwane buyatshintsha. Kule meko, nokuba isibambiso sirhoxisiwe, izangqa zesithembiso azihlali zibuyiswa. Kufuphi? Kuxhomekeke kuhlobo lokwahlukana, utshilo u-Brinkman.
Kwizibini ezininzi, izithembiso zokuthembisa ziyandulela ukubandakanyeka. Ukuba ulungele ukuphucula ukusuka kwisithembiso ukuya kwisindululo, jonga ezi izimvo zesindululo sothando . Unokujonga kwakhona indlela abacele ngayo Isindululo sokwenyani Kwaye a Isindululo sombono wenkunkuma .
izipho zonyaka wokuqala zomtshato kuye
uceba umtshato kuhlahlo-lwabiwo mali
ukucoca ilokhwe yomtshato
uluhlu lwamagama okugqibela aqhelekileyo
iilokhwe ezitshatileyo ezingabizi mali ingaphantsi kwe-100